कस्तो प्रकारको यौनासन लोकप्रिय मानिन्छ ? - समायोजन खबर
कस्तो प्रकारको यौनासन लोकप्रिय मानिन्छ ?
यौन क्रियाकलापलाई एक महत्वपूर्ण क्रियाकलापका रुपमा लिइन्छ । यौनका विषयमा साँधुसन्त देखि सामान्य मानिस सम्मले चासो खान्नु स्वभाविक हो । कति मानिसले यौनका विषयमा खुलेर कुरा गर्छन् भने कतिले लुकिछिपी भएपनि यौन विषयमा जानकारी लिनु स्वभाविक हो । त्यसैले यौनका विषयमा खुल्लारुपमा बहस, चिन्तन कम हुने गरेको पाइन्छ । विज्ञानले समेत संसारको सर्वोत्कृष्ट आनन्ददायक क्षण यौनलाई लिने गरेको छ ।
यौन जीवनलाई अझ आनन्दायक बनाउन यसका आसनको प्रमुख भूमिका रहेको हुन्छ । त्यसैले यौन क्रियाकलापलाई सुखद तथा चरम उत्कर्ष बनाउन विभिन्न खालका पोजिसन, वार्तालाप, सयन कक्ष, स्थानजस्ता कुराको भूमिका रहन्छ । आफ्नो यौन साथीको इच्छा,भावनालाई बुझेर यौन सम्पर्क राख्नु पर्दछ जसले दुवैलाई छुट्टै प्रकारको आनन्द दिलाउँछ । यसर्थ महिला पूरुष दुवैलाई अति आनन्द दिने खालका यौनका आसनहरुलाई ख्याल राखि गरेका संभोगले दुवैलाई आनन्दको उत्कर्ष सम्म पुर्याउँछ ।
त्यस्तै केही लोकप्रिय मानिएका यौन आसनका बारेमा युगल जोडि जानकार हुनु पर्दछ । जस्तै–
गौंआसनः महिलाहरूलाई बढि आनन्ददायी आसनको रुपमा लिइने आसन गौआसन हो । यो आसना संभोग गर्दा आक्रामक प्रकारको संभोग हुने गर्दछ । यो आसनलाई सबैभन्दा कामुक आसन समेत भनिन्छ । यो आसनमा पुरुषमाथि महिला चढेर गरिने संभोगलाई गौंआसन भनिन्छ । यसमा पूरुष भन्दा महिला बढि एक्टिभ हुने गर्दछन् ।
कुकुरासन : यो आसनमा महिललाई बढी आनन्द आउने हुँदा यो आसनमा संभोग गर्न महिलाहरु बढी लालायित हुने गर्छन् । यसलाई लोकप्रिय संभोगासन पनि भनिन्छ । प्रायः महिलाले आफ्नो पुरुष साथी माथि यहि प्रकारको संभोगासनको अपेक्षा राख्छन् भनिन्छ ।
हेराहेरी आसन : प्रायः सबै यौनजन्य क्रियाकलाप यही आसनबाट शूरु हुने मान्यता रहेको छ । यो आसनमा आँखामा आँखा जु्धाउँदा दुवैलाई बढी आकर्षण हुने हुनाले यसलाई पनि लोकप्रिय आसनका रुपमा हेरिन्छ ।
परम्परागतासन : यो आसन जवान देखि पौढ सम्मका मानिसहरुमा प्रायस लोकप्रिय मानिन्छ । धेरै लज्जालु स्वभावका महिलाहरु यो आसनको अपेक्षा राख्दछन् । यसमा पुरुष माथि र महिला तल रहेर गरिने आसनलाई नै परम्परागतासन भनिन्छ । –एजेन्सिबाट
२०७६ भदौ १२ गते राती ९ :५४ मा प्रकाशित